28. Novena yaAmai veRubatsiro RusingagumiNovena kuna Mwari Baba Mwari Baba vangu vokudenga, ndinokupfugamirai uye handisi chinhu pamberi poUkuru hwenyu. Imi moga ndimi Iye Chokwadi, Upenyu noUnaku. Kunyangwe zvazvo ndiri munhu nhando asingakodzeri, ini ndinokutunhidzai, ndinokurumbidzai, ndinokutendai, ndinokudai muri pamwe noMwanakomana wenyu Muponesi nomukoma wedu Jesu Kristu, nomumwoyo wake wetsitsi nomutsa uye nomukodzero yake isina mugumo.
Amen Novena yeZuva rokuberekwa kwaKristu
Novena kuna Amai vedu vekuFatima Mhandara tsvene kwazvo, makafadzwa nokushanyira Fatima mukaratidza vana vafudzi, upfumi hwenyasha hwakavigwa mumunamato weRusariro. Ndinokutetererai kuti muise mumwoyo mangu, moto wechido chokunamata rusariro. kuti nomukurangarira zvakaratidzwa zvokununurwa zviri murusariro, ndiwanewo nyasha netsika dzakanaka dzandiri kukumbira..
Novena kuna Amai mubatsiri waVakristu Maria Mutsvene kwazvo ndinokukwazisai seHosi yangu ndichikutendai pamusana pamakomborero asingaverengeki amunodururira vose vanopotera nokwamuri vachida kubatsirwa nemi.
Novena kuna Anna Mutsvene (Murevereri wavana Amai)
Novena kuna Josefi Mutsvene (Mudziviriri nomurevereri weSangano Katorike)
Novena kuna Rita Mutsvene (murevereri wavanoshaya)
Ndinokundikana nokuda kwoutera hwangu. Ndireverereiwo kuna Mwari kuti andidzorere murudo rwake kuburikidza nenyasha dzake agonondibatsira munzira yangu yoruponeso. Norudo nemutsa wenyu, inzwaiwo munamato wangumundireverere kuna Mwari ndiwanewo izvi zvandinokumbira ....
Novena kuna Peregrine (murevereri wevanorwara negomarara)
USEFUL LINKSMINAMATO II PRAYERS